La kulan: Ninka Jidadka ku midabeeya Ubaxyo si ay dadku ugu farxaan! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / La kulan: Ninka Jidadka ku midabeeya Ubaxyo si ay dadku ugu farxaan!
Albert Einstein oo ahaa aqoon-yahan Yuhuudi-Maraykan ah ayaa wuxuu yiri: “Adduunyada waa meel halis u leh nolosha Aadanaha. Mana ahan inay ku nool yihiin dad xun – waa in dadkii samaha u saaxiibka ahaa aysan gudan mas’uuliyaddii wanaagsaneyd.”
Previous: Mikel Arteta oo ku kalsoon in Aubameyang uu baaqi ku ahaan doono Arsenal
Next: Eric Dier oo heshiis kordhin u sameeyay Tottenham